Dood: Dabaal degga Juulka ama Kirismaska | Somaliska
Maanta oo taariikhdu tahay 24 December waa dabaaldegga maalinta bilowga Juulka ama Christmas ee loo yaqaan Julafton taasoo balaayiin ka mid dadka caalamka ay u dabaal dagaan dhalashadii nabi Ciise (nnkh) inkastoo taariikhdu cadeysay in uusan dhalan maalintaan. Dabaaldegga Juulka ayaa la aaminsanyahay in uu ka soo jeedo caadooyinkii dadkii cawaanta ahaa ee ka horeeyay Kiristaanka.
Sanadihii u dambeeyay ayuu Kirismasku noqday xaflad ganacsi iyadoo shirkadahu ay lacag fara badan ku bixiyaan xayeysiinta si ay faaiido uga sameeyaan hadiyadaha lays waydaarsanayo. Sidoo kale xiligaan ayaa ah waqtiga keliya ee dad badan oo Kiristaan ah ay fursad u helaan in ay la kulmaan qaraabadooda ama ay booqdaan kaniisada. Dhinaca kale ayuu Kirismasku yahay xili ay dhacaan waxyaabo badan oo lidi ku ah diinta Kiristaanka iyo Islaamka oo ay ugu horeysa sino, cabitaan. iwm.
Arinka yaabka leh ayaa ah in dad badan oo aan Kiristaan ahayn oo ay ku jiraan Muslimiin ay ka qeyb qaataan dabaal degga Juulka. Qaar badan ayaa ku dooda in Kirismasku uusan hada ahayn dabaaldegg diimeed ee uu noqday mid caalami ah. Qodobkeena dooda maanta waa maxay sababta ay dadkaas uga qeybqaataan barnaamij ka soo horjeeda diintooda?
Culumada Islaamka ayaa qaba in aysan banaaneyn in lagala qeyb qaato Kiristaanka dabaaldagooda iyo xitaa in loogu bishaareeyo “God Jul” iwm maadaama ay arintaas tahay in aan kala qeyb qaadanayno dunuubta iyo shirkiga ay faraha kula jiraan. Maxaase laga yeelayaa kuwa noogu bishaareeya ciid wanaagsan marka aan ciidayno isla markaana naga filaya in aan sidoo kale samayno marka ay ciidoodatahay?
Fikradaada ku darso>>>
OW Barow says:
hadaan fikirkeyga ka dhiibto waxaan dhihilahaa waxna ha, udhimin waxna haku darin waxa meeshaas ka socdo teyda kale allah soo hanuuniye illaahey asigaa awood leh
asc aniga wexey ila tahay in laga haro wixi diinteena naga reebtay si aan shirki u galin waayo dadkan waxa ey wadaan waa shirki maba la qeybsan karno wax diin ku saabsan mida kale ee an rabo jimcaale in aan xasuusiyo wexey tahay in ey aayad ku soo degtay nabigeena suuban s c w marka ey dheheen diin teena mar nala caabud aan adna taada mar kula caabudnee taasi on ku soo qaatay in ey anaga ciid wanaagsan na dhahaan markan ciideyno markey ayaga ciidayaane ey naga sugayaan sidoo kale marka cidne nagu qasbi meyso in aan kala qeyb qaadano ciidooda hadii aan anaga rabin ee aan ogaano wixi dembi naga soo gaarayo wax fiican maaha wax ilaahey kaa fogeynayo in aad dad ku xushmeyso wabilaahi towfiiq
Nabi ciise NNKH waa nabi ixtiraam inaga mudan lkin sida ay gaaladu u haystaan inagu uma haysano kaliya inuu yahay mid ka mida 25ka nabi ee ALLAH soo diray inuu yahay ayuunbaynu aminsannay,
Abu Xafsah says:
Waxaan Ilaaheey Iyo Rasuulkiisu Dood GELIN yaan Dood La Gelin.
Waxa Xaaraamta ah , dadka Caamada ah ka dooda yaan la oran.
Culumado marnaba iskuma Khilaafin , In Xaaraam tahay. Welibana qofka caqiidadiisa wax u dhibeeyso…